Masoivoho Alemana Gehrig Harald Handao an’i Madagasikara
Tale jeneralin`ny BIANCO “Tsy handeferana ny fanodinkodinam-bolam-panjakana”
Amin`ny herinandro ho avy izao, handalo eo anivon`ny PAC (Poles anti-corruption) na fitsarana misahana ny kolikoly ny raharaha mikasika fanodinkodinam-bolam-panjakana niseho teny anivon`ireo minisitera eny amin`ny PAC.
Repoblikan'i Inde Nahay namadika ny fanjanahana ho tanjaka ara-toekarena
Ny 15 aogositra 1947 no afaka tamin’ny fanagejan'ny Britanika ny Indiana rehefa voazanaka nandritra ny taona maro. Nankalazaina omaly, ny tsingerin-taona faha-73 nahazoan'izy ireo ny fahaleovantenany..
Asa fanaovan-gazety Nampahafantarina omaly ny momba ny “journalisme collaboratif”
Fomba fiasa efa mihamahazo vahana any ampitan-dranomasina ny “journalisme collaboratif”, ary hahazoana tombony, toy ny hoe : mihena ny vola lany rehefa mizara asa ny mpanao gazety.
Gérard Rakotonirina “Tsy voasazy izany raha mpanao gazety tena matihanina”
Tany amin’ny taona 2016, dia nisy ny hetsika niadiana ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety na ny MLE.
Pac “ Pôle Anti-Corruption” Hamoaka dosie mavesatra tsy hoe ela
Mbola maro ireo antontan-taratasy eo anivon’ny Pac na « Pôle Anti-Corruption” miandry ity vovonana iray miady amin’ny kolikoly ity.
Fitantanana ara-bolan’ny Jirama Hampanao fanadihadiana lalina ny fanjakana
Tapaka tao anatin’ny filankevitry ny minisitra omaly alarobia 7 aogositra fa tsy maintsy atao toy ny fitantanana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny orinasa JIRAMA manomboka izao ka tsy maintsy hisy ny « audit organisationnel et financier » na fitsirihana ara-pitantanana sy ara-bola,
Fananganana barazy any amin’ny RN9 Mpitaky vola tsy ara-dalàna 5 voasambotra
Voasambotry ny Zandary ireo mpanao barazy tsy ara-dalàna mitaky vola an-keriny an'ireo mpitatitra sy mpizahatany ary ny mpiseradia mampiasa ny lalam-pirenena faha-9 mampitohy an’i Morondava-Belo sur Mer-Manja.
Nahavita ny fe-potoam-piasany teto Madagasikara, ny Ambasadaoron’i Alemaina, Atoa Gehrig Harald mivady, ka tonga nanao veloma ny praiminisitra Ntsay Christian.
Tsapan’ny firenena Alema ny ezaka lehibe vitan’i Madagasikara amin’izao governemanta vaovao tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian izao, ary mahabe fanantenana ny amin’izany, hoy io diplomaty io. Anisan’ny vokatra notanisainy ny teo amin’ny lafiny tontolo iainana, fitsarana, toekarena. Nohamafisin’ny praiminisitra izany. Notsindrian’ny Ambasadaoro manokana ny ezaka vitan’ny governemanta Malagasy teo amin’ny ady amin’ny famotehana ny ala sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo hazo sarobidy. Momba ny fihaonana nisy teo amin’ireo mpitondra Malagasy sy ny mpitondra Alemana dia nambarany fa velom-panantenana ihany koa ny tenany, ny amin’ny hanamafisana ireo fiaraha-miasa amin’ny ho avy, raha ny lafiny diplaomasia sy toekarena no resahina. Nitondran’ny praiminisitra fanazavana ny fifanakalozana mahakasika ireo ezaka vita hampihenana ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny fitrandrahana ny harem-pirenena.